14 / 08 / 2017 - Bogga 2 - RayHaber | raillynews
Maalinta: Ogast 14, 2017
Baabuurihii ku jiray Samsun Gar Park, oo astaan ​​u ahaa muddo, ayaa laga saaray aagga ay ku sugnaayeen muuqaalka cusub. Waxay ku yaalliin Gar Park xaafada Karadeniz ee degmada İlkadım ee Samsun [More ...]
Bayram, Mashruuca Metro ee Gebze
Xoghayaha guud ee Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli İlhan Bayram ayaa booqasho ku soo noqdey Adnan Köşker, Duqa Magaalada Gebze. Qaab dhismeedka booqashada, kulan faahfaahsan ayaa lala yeeshay Dawladda Hoose ee Gebze oo ku saabsan mashaariicda la fulin doono. kulanka [More ...]
Saldhigga Metro ee Umraniye Ataşehir Goztepe ayaa bilaabmay
Howlaha dhismaha ee Göztepe Station ee Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro, oo hadda ka socda dhisme ku yaal dhinaca Anatolian-ka ee İstanbul, ayaa socda. Dhismaha saldhigga inta lagu gudajiray Göztepe 60. Maxkamadaha tennis-ka ee barta sanadka ayaa loo isticmaali doonaa sidii goobo dhisme oo ku meelgaar ah. daraasadda [More ...]
19 kiiloomitir ee hadda jira ee metrooga metrooga Izmir wuxuu gaarayaa 7.2 kiiloomitir oo leh 26 kilomitir F. Altay-Narlıdere Line Iskuulka. 19-kiiloo mitir ee qadka metrooga Izmir waa 7.2 kiiloomitir Fahrettin Altay-Narlıdere [More ...]
War-murtiyeedka lagu daabacay arrinta rasmiga ah ee rasmiga ah ee Gazette, ayaa la joojiyay nidaamkii shaqaalaha TCDD. Xeerarka la tirtiray iyo war-murtiyeedka laga soo saaray mowduucan ayaa lagu daabacay arrinta 12 ee rasmiga ah ee Gazette taariikhi ah oo ku taariikhaysan Agoosto, Sabtida. [More ...]
Nidaamka Xeer-ilaalinta Anshaxa TCDD Published
Republic of Turkey General Directorate of State Tareennada Maamulka Disciplinary Kormeerayaasha Regulation, maanta 12 2017 taariikhaysan August 30152, XNUMX, oo waxaa lagu daabacay in faafinta rasmiga ah. Transport, arrimaha Badda iyo Wasaaradda Isgaarsiinta ka: Turkish State Tareennada [More ...]
Maanta taariikhda: 14 Agoosto 1944 Khadka Beekiri-Garzan Taariikh